राष्ट्रियसभा चुनावः गठवन्धनको झण्डै ‘क्लीन स्वीप’, एमाले एक जितमा खुशी ! (सूचीसहित) – Nepal Press
२०७८ माघ १२ गते १९:२९
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले शानदार जित हासिल गरेको छ । यद्यपि, गठवन्धनलाई ‘क्लीन स्वीप’ गर्नबाट भने एमालेले रोक्यो ।
अन्तिम परिणाम अनुसार चुनाव भएका १९ मध्ये १८ सिटमा गठवन्धनमा आवद्ध दलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेश १ मा एमालेका सोनम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएपछि ‘क्लिनस्वीप’ बाट गठवन्धन चुकेको हो । यस प्रदेशमा पनि गणितीय हिसाबले गठवन्धन नै बलियाे थियाे । त्यही भएर गठवन्धनका नेताहरु क्लीन स्वीपकाे दावी गरिरहेका थिए । गठवन्धनकाे साे दावीलाइ फेल खुवाएकाे भन्दै एमाले पंति खुशी बनेकाे छ । साथै, शेर्पाको विजयले राष्ट्रियसभामा एमालेलाई नै ठूलो पार्टीका रुपमा कायम राखेको छ ।
आजको चुनावअघि राष्ट्रिय सभामा २३ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल थियो । चुनावबाट ७ सिट गुमाए पनि एक जितका कारण एमाले ठूलो दल बनिरहन सफल भएको हो । एमालेसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित १६ सांसद छन् ।
एमालेपछि माओवादी केन्द्र ठूलो दल माओवादी बनेको छ । चुनावअघि १४ सिट रहेको माओवादीले निर्वाचनपछि १ सिट थप्दै दोस्रो ठूलो दल बनेको हो । माओवादीका ४ सिट रिक्त रहेकोमा गठवन्धनको भागबण्डाबाट एक सिट थपेको छ । अब माओवादीको राष्ट्रियसभामा १५ सिट रहने छ ।
तेस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । चुनावअघि ७ सिटमा मात्रै सीमित रहेको कांग्रेसले चार सिट थप्दै तेस्रो ठूलो दल बनेको हो । कांग्रेसका तीन सिट रिक्त रहेका थिए । गठबन्धनमा ६ सिट पाएको कांग्रेसले तीन सिट थपेपछि १० सिट पुर्याएको छ ।
यस्तै, एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी चौथो ठूलो दल बनेको छ । चुनावअघि ७ सिटमा रहेको नेकपा एसका ४ सदस्य रिक्त रहेका थिए । गठबन्धनमा नेकपा एसले ५ सिट पाएको थियो । नेकपा एस एक सिट थप्न सफल भएको हो । अब ८ सिटसहित नेकपा एस चौथो ठूलो दल बनेको हो ।
एक सिट रहेको जनता समाजवादीले गठवन्धनमा २ सिट पाएको भए पनि एक सिट मात्रै थप्न सफल भयो । प्रदेश १ मा एमालेका शेर्पासँग पराजित भएपछि जसपाले सम्भावित एक सिट गुमाएको हो । अब राष्ट्रियसभामा जसपाका दुई सांसद भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा मात्रै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रियसभामा समेत ‘इन्ट्री’ भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको दलिततर्फ जनमोर्चाका उम्मेदवार तुलबहादुर विश्वकर्मा विजयी भएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा लोकतान्त्रिक समाजवादीको पनि एक सिट रहेको छ ।
कसले कति जिते ?
एमाले- सोनम ग्याल्जेन शेर्पा
नेपाली कांग्रेस- कृष्णप्रसाद पौडेल (वागमती), दुर्गा गुरुङ (कर्णाली), कमला पन्त (गण्डकी), युवराज शर्मा (लुम्बिनी), गोपाल बस्नेत (प्रदेश १) र नारायणदत्त मिश्र (सुदूरपश्चिम)
माओवादी केन्द्र- जगत पार्की (सुदूरपश्चिम), सुरेश आलेमगर (गण्डकी), नरबहादुर बिष्ट (कर्णाली), भुवनबहादुर सुनुवार (गण्डकी), उर्मिला अर्याल (मधेश)
एकीकृत समाजवादी- जयन्ती राई (प्रदेश १), गरिमा शाह (सुदूरपश्चिम), राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे (लुम्बिनी), उदयबहादुर बोहरा (कर्णाली) र गोमा तिमिल्सेना (वागमती)
जनता समाजावदी- महमद खालिद (मधेश)
राष्ट्रिय जनमोर्चा- तुलबहार विश्वकर्मा (लुम्बिनी)
एकीकृत समाजवादी- ७
जनता समाजवादी- १
एकीकृत समाजवादी- ८
जनता समाजवादी- २
लोकतान्त्रिक समाजवादी- १
प्रकाशित: २०७८ माघ १२ गते १९:२९